अष्ट्रेलियामा नर्सहरुको लागि नयाँ नियम आउने ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
अष्ट्रेलियामा नर्सहरुको लागि नयाँ नियम आउने !
प्रकाशित मिति : कार्तिक १८, २०७५ आईतबार
अष्ट्रेलियामा आफ्नो करियर अगाडी बढाउन चाहने अन्तर्राष्ट्रिय योग्यता प्राप्त र मिडवाइफ़्रि नर्सहरुको लागि नयाँ नियम आउने भएको छ । नर्सहरुले रजिस्ट्रेसन गर्दा हाल ८ वटा मापदण्ड भएकोमा अब ३ वटामा झारिने बताइएको छ । ती मापदण्ड भने अहिले सार्वजनिक भएका छैनन् ।
२०१९ देखि लागु हुने भनिएको सो परिवर्तन अनुसार, रजिस्ट्रेसनको लागि एप्लाई गरेका नर्सहरुले ओरेन्टेसन कक्षा लिनुपर्नेछ । सो ओरेन्टेसन कक्षा तीन भागको हुनेछ । पहिलो भागमा अष्ट्रेलियाको स्वास्थ्य सम्बन्धि नियम, तरिका, स्वास्थ्यस्थिति आदि विषय हुनेछन् । दोस्रो भागमा अष्ट्रेलियाको संस्कृति, समाज सम्बन्धि विषय हुनेछन् र तेस्रोमा कामदारदाताले दिने काम सम्बन्धि ओरेन्टेसन हुनेछ ।
यी नियम आएको केही समय पछि ब्रिजिंग कोर्स हुनेछैन । त्यसको ठाउँमा ‘Outcome – Based – Assesment ( OBA )’ हुनेछ । यसमा तोकिएको सबै मापदण्ड पूरा नभएका अन्तर्राष्ट्रिय योग्यता प्राप्त र मिडवाइफ़्रि नर्सहरुले अवसर पाउनेछन् । ओबिएमा cognitive र behavioural गरि दुई परिक्षा हुनेछन् । Cognitive मा computer-based multiple choice questionnaire हुनेछ र behavioural मा objective structured clinical examination हुनेछ ।